उपराष्ट्रपतिको अंग्रेजी–मोह - नोटबुक - नेपाल
अचेल अंग्रेजी शब्द उपयोगको विस्तारले दैनिक बोलीचालीमा समेत नेपाली शब्द हराउन थालिसके । अर्कातिर मातृभाषा र स्थानीय भाषा–मोह संसारभर बढ्दै छ । सामान्य सन्दर्भमा पनि अंग्रेजी शब्दको प्रयोग त्यति रुचिकर लाग्दैन । सरकारी तहबाटै नेपाली शब्दको हेलाहोचा हुँदा झनै नमीठो लाग्ने रहेछ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको नयाँ निवासको नामले मन कटक्क बनाइदियो । कान्तिपथको ‘बहादुर भवन’ बाट केही महिनाअघि लैनचौरको समाज कल्याण परिषद् भवनमा सरेका उपराष्ट्रपति पुनले भवनको नाम राखिदिए– ग्रीनहाउस ।
तर त्यही ग्रीनहाउसको सट्टा ‘हरितगृह’ वा यस्तै कुनै उपयुक्त नाम राखेको भए के बिग्रिन्थ्यो ? कम्तीमा सरकारी स्तरबाट त नेपाली शब्द प्रयोगलाई बचाइराख्न सकिन्थ्यो । दरबारिया झल्कोबाट मुक्त हुन उपराष्ट्रपतिले भवनको रंग र नाम परिवर्तन गरेका हुन सक्छन् । जे भए पनि भवनलाई नेपाली नामकरण गर्न सकिन्थ्यो ।
बल्खुका छुच्चा कर्मचारी
झ्याल नम्बर १४ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको यो झ्यालबाट बीएडको ट्रान्सक्रिप्टका लागि फाराम बुझाउने र लिने गरिन्छ । वर्षका केही दिन विद्यार्थीको भीड हुन्छ, यो झ्यालमा । अरु बेला कर्मचारीलाई घाम ताप्ने प्रशस्त फुर्सद । तर त्यही भीडमा तीन महिला कर्मचारी रिसाइरहेका मात्रै हुन्छन् विद्यार्थीसँग । गाली गरिरहेका हुन्छन् । म पनि ११ असारमा बहिनीको ट्रान्सक्रिप्टका लागि त्यो झ्याल पुगेँ । तर प्रथम वर्षको मार्कसिटमा नामको स्पेलिङ गलत रहेछ । एक महिलाले नाम सच्याउन भनिन् । तर कहाँ जाने, के गर्ने केही बताइनन् ।
‘गल्ती गर्ने तपाईँहरु दुःख पाउने हामी, प्रस्टसँग त बताउनुस्’ भनेको मात्रै के थिएँ, मसँग पड्किन् भुटेको मकैजस्तै । बल्ल थाहा भयो निवेदन लिएर २ नम्बर कोठा जानुपर्ने रहेछ । त्यहाँ पनि उपरखुट्टी लगाएर बसेकी अधबैँसे महिला त्यस्तै रिसाहा । ती महिलाले मलाई ३ पटक निवेदन सच्याउन लगाइन् । पैसा तिर्न लगाइन् बैंकमा । कसैको भने पैसा नतिरिएको निवेदनसमेत बुझिरहेकी थिइन् । पैसा तिर्नुपर्ने हो कि होइन मैले बुझिनँ ।
२ नम्बर झ्यालबाट पठाइयो गोप्य शाखा । त्यहाँका कर्मचारी झनै रिसाहा । ‘मैले हुँदैन भनेपछि हुँदैन, जहाँसुकै जानुस्’ गोप्य शाखाको बीएड फाँटका कर्मचारी सातो जाने गरी कराए । तिनले प्रवेशपत्रको सक्कल प्रति मागे । सक्कल प्रति खोटाङमै थियो, ल्याउन सम्भव थिएन । पछि ल्याउँछु भन्दा पनि फाराम बुझेनन् । भोलिपल्ट सवा १० मै पुगेँ । अघिल्लो दिनकै फाइल बुझाएँ । सक्कल छैन भनेर फेरि थर्काए । रिसाउँदै फाइलमाथि लेखिदिए, प्रवेशपत्रको सक्कल प्रति र कलेजको चिट्ठीसहित ३ दिनपछि आउनू । पछि जाँदा न प्रवेशपत्रको सक्कल मागे, न त कलेजको चिट्ठी ।
त्यहाँबाट २ नम्बर झ्यालमा पठाए । त्यहाँ भनियो– १० दिनपछि आउनू । किनकि त्यो फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने सहनियन्त्रक बिदामा रहेछन् । २२ असारभित्र शिक्षण अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि फाराम भर्नुपर्ने म्याद । त्यो भ्याउन यति मरिहत्ते गर्नु परिरहेको छ, एक सातादेखि । अन्तिममा आएर १० दिनपछि अर्थात् २२ असारमा आउनू भन्छन् । परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी भेट्न कार्यकक्ष पुग्दा विद्यार्थी नेतासँग बैठकमा रहेछन्, दुई घन्टादेखि । त्यो पनि चुकुल लगाएर बसेका । त्यही बेला सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, “पनिकाले एउटा पक्र दिन्छ, ट्रान्सत्रिप्ट प्रक्रियामा रहेको भनेर । त्यसका आधारमा फाराम भर्नू ।”
पनिकालाई यो पनि थाहा रहेनछ कि शिक्षक सेवा आयोगले अनलाइन फारम मात्र लिइरहेको थियो, जहाँ यस्ता पत्रको काम हुँदैन । जोशी सर, विद्यार्थीको भविष्य नै अन्धकारमा पार्ने यस्तो लथालिंग र बेवारिसे पारा पनि हुन्छ पनिकाको ?
सुध्रेका ट्याक्सी ड्राइभर
सस्तो, भरपर्दो र सहज यात्राका लागि टुटल र पठाओले बजार खिचेका छन् । प्रविधिमैत्री नभएकाहरुले त्यति ख्याल नगरे पनि ट्याक्सी चढियो भने महसुस हुने रहेछ टुटल र पठाओको बजार दबाब । अचेल केही भन्नुपर्दैन । सीधै मिटर चलाउन थाल्छन्, ट्याक्सी ड्राइभर ।
शुल्कमा पनि सहज भइदिएछ । अघिल्लो साता मैतीदेवी–सानोठिमी (मगरगाउँ) पुग्दा ३ सय ७२ रुपैयाँ उठ्यो । साँझ फर्किंदा ३ सय ८८ । आश्चर्यचाहिँ लागेको थियो उस्तै–उस्तै किन भनेर । अर्को पटक अघिल्लो शुक्रबार सानो भर्‍याङदेखि अनामनगर आउँदा २ सय ८८ रुपैयाँ उठेको थियो, जबकि केही दिन पहिला २ सय ७२ थियो । त्यति धेरै रकम उठ्नुमा जाम पनि कारण थियो । आइतबार रत्नपार्क–रानीवन पुग्दा पनि ३ सय रुपैयाँ कटेन । मंगलबार पनि अनामनगर–नयाँबजार पुग्दा २ सय ३२ उठ्यो । र, राती साढे ९ बजे फर्किंदा २ सय ९८ उठ्यो । यी सबैमा मिटर चलाउनु नभन्दै मिटर सुरु गरेका थिए । मंगलबार साँझ ट्याक्सी ड्राइभरलाई सोधेँ– “अचेल टुटल र पठाओले गर्दा मिटरमा हिँड्न थालिएछ है !” ती ड्राइभरले टुटल र पठाओलाई गाली गर्दै मिटरमा चल्न दबाब दिएको स्वीकारे ।
प्रतिस्पर्धाले सेवाग्राहीलाई फाइदै पुग्दो रहेछ ।
प्रकाशित: असार ३१, २०७६
थप केही नोटबुक बाट
सेनाका पत्याइनसक्नु गफ
भिडियो संवाद कि मन्त्रिपरिषद् ?
चोर्न लगाउने आमिर
इतिहास मेटुवा अख्तियार
शम्भु राईका फ्यान सिक्किमे मन्त्री